Su'aalaha Inta Badan La Isweydiiyo | WatercolorPNG
Waa maxay sababta loo yaqaan WatercolorPNG?
Waxaa la aasaasay Agoosto 2016, WatercolorPNG waa shabakad madaxeed oo iibisa sifooyin khaas ah oo tayo sare leh qiimo jaban. Waxaan haysannaa kumanaan ubax biyo ah iyo waxyaabo kale oo naqshadeysan si ay u siiyaan beesha caalamka ee wax soo saarka. Waxaa nala aasay Ukraine laakiin waxaan u adeegnaa suuq caalami ah.
Halkeen ka heli karaa alaabtayda la iga iibsaday?
Marka hore, geli xisaabtaada boggayaga. Kadibna, tag Halka My Account kaas oo ku yaala dhinaca midigta sare ee shaashaddaada. Waxaad arki kartaa dhamaan badeecooyinkaaga / iibsigaaga halkaas.
Halkee ayaan ka heli karaa xiriirkayga download?
Ka dib iibsashada, waxaad heli doontaa email ah mawduuca "Downloads aad diyaar tahay". laga bilaabo delivery@shopify.com. Xiriirkani waa mid joogto ah, markaa waxaad isticmaali kartaa inta aad rabto.
Waa noocee noocyada faylasha ah ee aad bixiso?
Waxaan ku bixineynaa faylasha PNG iyo JPG ee isku dhafan kala duwan. Waxay noqon kartaa shey gooni ah ama qayb ka mid ah xidhmada.
Uma muuqan karo inaan soo dejiyo / raadsado faylashadayda ka dib markaan sameeyo lacag aan iibsado. Ma i caawin kartaa?
Marka iibsigaa lagu sameeyo xisaabtaada, waxaad awoodi doontaa inaad soo dejiso marar badan sida aad jeceshahay kaliya xiriiriye, kaas oo aad ka heli doonto emailka xaqiijinta. Haddii ay dhibaato kaa haysato helitaanka iibsiyadaada, hubi inaad ku qorto ereyada saxda ah ee ku jira bogga raadinta dhinaca midigta ama kor u xaji boggaga taariikhda iibsashadaada.
Haddii aad bixinayso PayPal, waxaa dhici karta in mararka qaar dib udhacdo PayPal si aad u hesho boggeena si loo xaqiijiyo iibsashadaada PayPal. Calaamaddan waxaa looga baahan yahay in lagu aqoonsado iibsigaaga oo kuu oggolaado inaad soo dejiso faylka. Haddii ay taasi dhacdo, fadlan sug daqiiqadaha 15 intaadan isku dayin inaad mar kale soo celiso.
Maxay u qaadataa in ka badan saacad si aan u soo dejiyo xirmadeyda?
Tani waxay marmarka qaarkood noqon kartaa xiriirka internetka oo gaabis ah oo la xirriiraya bulkada. Haddii xaaladdu aysan fiicneyn, fadlan sawir qalad ah fariimahaaga (haddii ay jirto) oo nagala soo xiriir si aad u heshid kaalmo iyo xiriir kale si aad u soo qaadato xirmooyinkaaga.
Sidee baan u tagaa oo ku saabsan unzipping feylasha alaabtaada?
Dhamaan faylashadeena wax soo saarka waxaa lagu bixiyaa faylasha ZIP si loo badbaadiyo booska una heysto faylal fara badan si loo helo fursad fudud.
Waxaad fayl geli kartaa faylka adoo raacaya talaabooyinkan:
Si loo soo saaro fayl ama hal xaraf:
Labaad-guji faylka la fureen si aad u furto.
Kadibna, jadwalka ama faylka ka soo rog faylka feylka ah ee ku yaal meel cusub.
Si loo soo saaro waxyaabaha ku jira dhammaan faylasha la fureen:
Guji "Ka saar dhammaan".
Ka dibna raac tilmaamaha kore.
Labaad-guji feylka .zip, ka dibna raadi feylka alaabta ama faylka alaabta. Haddii aadan haysanin barnaamijyada aad uga fursanayso faylashaada kombiyuutarkaaga, waxaan kugula talineynaa inaad sameysid 7-Zip. ama WinZip.
Anigu waxaan ku jiraa arrin amar ah.
Waan ka xumahay inaan maqalno inaanad awoodin inaad meel dalbato. Fadlan la xiriir Adeegga Macaamiisha https://watercolorpng.com/pages/contact-us waxaanan ka shaqeyn doonnaa xalinta arinta sida ugu dhakhsaha badan.
U soo wargeliso olole loogu talagalay xadgudubyada siyaasadeed.
Sida naqshad mashiinka ah ee user-abuuray, waxaan ka qaadnaa arimaha xad-gudubyada content xad-dhaaf ah oo qadarin inaad qaadato wakhti aad ku soo sheegto xadgudub looga shakisan yahay. Si aad uhesho cabasho rasmi ah, fadlan nala soo xiriir.
Sideebaan ula xiriiraa taageerada macaamiisha?
Waanu ku faraxsanahay inaan ka jawaabno su'aalaha aad qabi kartid. Fadlan la xiriir adeegga macaamiisha ee https://watercolorpng.com/pages/contact-us